Vuze ka DVD Mac / Win - Ọkụ DVD si Vuze (Windows 8 gụnyere)
> Resource> DVD> Olee Ọkụ DVD si Vuze na Vuze ka DVD burner (Windows 10 gụnyere)
Vuze (Azureus) bụ na-emeghe isi software dabeere na Azureus BitTorrent ngwa, nke ike-eji ibudata fim, vidio, na egwú ma ọ bụ mee ka a BitTorrent ahịa dị ka uTorrent ibudata iyi nkiri faịlụ. Ọbụna obere fim pụrụ ịchọta na Vuze. Ya mere, ndị na-amasị ibudata fim Vuze.
Ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka ọkụ DVD si Vuze fim na-ele videos on n'ụlọ nkiri ma ọ bụ usoro na n'ụlọ DVD ọkpụkpọ. Wondershare Video Converter Ultimate (Windows 8 na-akwado) pụrụ inyere gị aka ọkụ Vuze ka DVD nakwa dị ka ndị ọzọ nile mgbe nile video formats na oké video àgwà na ngwa ngwa ọkụ ọsọ. Ole na ole clicks, ị nwere ike ọkụ ebudatara Vuze nkiri na DVD maka play na ihe ọ bụla DVD ọkpụkpọ. N'ihi na-ebufe faịlụ site na Vuze ka DVD na Mac, Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ga-ezi nhọrọ.
Firstly, free download Vuze DVD burner ebe a.
Cheta na: The n'okpuru ndu ewe Vuze DVD Ntụgharị maka Windows dị ka ihe atụ. The usoro iji ọkụ Vuze faịlụ ka DVD na Mac (Snow agụ owuru, Mountain odum gụnyere) yiri nke ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, biko rụtụ aka na Mac ọrụ 'ndu.
1 Ibu Ibu Vuze fim na dezie ha
Mgbe software ebudatara na arụnyere, na-agba ya na ị ga-ahụ interface dị ka n'okpuru. Akpa tinye ebudatara Vuze videos na "Ọkụ" interface site na-adọkpụpụta videos ka isi window ma ọ bụ ịpị "Tinye Files" button na-ahọpụta vidiyo si na draịvụ ike gị. Ndabara forder maka ihe ndị ebudatara Vuze iyi fim ga-C: \_ Ọrụ \_ <YourUsername> \_ Documents \_ Vuze Downloads maka Windows 7 na Vista, mgbe C: \_ Documents na Mwube \_ <YourUsername> \_ My akwụkwọ \_ Vuze Downloads maka Windows XP.
2 Họrọ DVD format na-eme ka DVD menu
Pịa "Change Template" nhọrọ n'akụkụ aka nri. N'oge a, a na-ere ọkụ DVD ọkachamara ga-emeghe. Họrọ a DVD menu si wuru na-free DVD menu ndebiri. Ị nwere ike mgbe hazie DVD menu ndabere oyiyi na ndabere music na-eme ka ọ na ihe ahaziri. Isure a DVD si Vuze faịlụ na-enweghị a menu, dị nnọọ họrọ "Ọ dịghị NchNhr" template.
Mgbe ahụ, ị ​​nwekwara ike idezi gị Vuze faịlụ iji nweta a mma video mmetụta na ya agbakwunyere edezi ngwaọrụ. Ka ihe atụ, cropping, n'usoro n'usoro, trimming, na-agbakwunye watermarks, na ndị ọzọ.
3 Preview na ọkụ Vuze nkiri na DVD
Kpọmkwem ịhụchalụ DVD video on DVD menu ka egwu na TV. Jide n'aka niile bụ kwadebere nke ọma na-eme ka mgbanwe ọ bụrụ na achọrọ n'ihu na ịpị "ok" button. Mgbe ahụ, fanye a ide DVD diski. N'okpuru "Change Template" nhọrọ, ebe ị pụrụ ime ka ụfọdụ ntọala Vuze DVD. Ke akpatre, pịa "Ọkụ" na-ere ọkụ Vuze ka DVD. The DVD diski ga-akpaghị aka ejected mgbe zuru ezu. Dị nnọọ fanye ya n'ime ụlọ gị DVD ọkpụkpọ na-enwe ọkacha mmasị gị na fim na vidiyo na gị na nnukwu TV!
Atụmatụ: Tupu ọkụ, ị nwere ike ịtọ na-ere ọkụ parameters dị ka mmepụta format: DVD, DVD nchekwa, ISO Files. I nwekwara ike ịgbanwe ebe nchekwa ịzọpụta faịlụ na ịtọ TV ọkọlọtọ (na-adabere gị mba, na-ahụ NTSC vs PAL), akụkụ video, wdg The mmepụta àgwà pụrụ ịbụ "ihe kwesịrị ekwesị diski", "Ọkọlọtọ video àgwà" ma ọ bụ "High Video Ogo" gị nhọrọ.
N'okpuru ebe a bụ zuru ezu video nkuzi:
Ihe banyere Vuze
Vuze na-ekwu kacha ụzọ chọta, download, ma kpọọ BitTorrent fim. Ọzọ ma ama BitTorrent ahịa bụ uTorrent. Abụọ nwere ha uru na ọghọm. Ha na-ma n'ụzọ zuru ezu ike nke na nbudata, eke, seeding .torrent faịlụ na elu ihe dị ka na-akpaghị aka na nbudata si RSS faili ntanetịime. Mgbe na-agbalị ozugbo na-ere ọkụ iyi faịlụ ka DVD. Nanị mgbe ebudatara iyi na fim ndị Vuze, ị pụrụ ọkụ DVD si Vuze ma na-ekiri na TV, hapụ free ohere, ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara mmasị fim n'ihi na afọ na-abịa.
Download Vuze ka DVD ngwa:
Olee otú iji tọghata na Ọkụ Torrent Movies ka DVD na Mac / Win
Top 10 isi iyi na-Download DVDStyler maka Free
Olee otú Ọkụ BBC iPlayer ka DVD
Dị iche iche Transition mmetụta maka Flash ngosi mmịfe & DVD ngosi mmịfe